Prime baby diaper အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
တစ်ထုပ်စမ်းသုံးပြီ ဖာလိုက်ဝယ်သုံးကြတဲ့ Prime baby diaper
" ကလေးအတွက်အရမ်းအဆင်ပြေတယ် အစ်မ
ပါးပါးလေး ၀တ်ထားမှန်းတောင်မသိဘူး စစ် "
ဆိုတဲ့မှတ်ချက်လေးတွေရထားတဲ့ prime baby diaper
၂ ထုပ်ဝယ်လျှင်ပို့ခ free (ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးမြို့တွင်းအတွက်သာ )
ကပ်ခွာနဲ့ ဘောင်းဘီပုံစံ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
S. 3-6kg 62ခု
M. 6-10. 54ခု
L. 9-13kg 48ခု
XL. 13-15kg 44ခု
L. 9-13kg 46ခု
XL 13-15kg 44ခု
XXL. >15kg. 42ခု. ပါပါတယ်။
ရန်ကုန် မန္တလေး အိမ်ရောက်မှငွေချေပါ။
လိုချင်တဲ့ဆိုဒ် အထုပ်ရေ နာမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် ကို chat box, or viber 09970097100၊ မှာ ပို့ပြီး မှာနိုင်သလို
Ph: 095072451 ကိုလည်းဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ိပါတယ်။
အော်ဒါမှာပြီး ၄ ရက်အတွင်းပို့ပေးပါတယ်
ရန်ကုန် မန္တလေး နေပြည်တော် အပါ မြန်မာနိုင်ငံအနံ့ရှိမြို့ပေါင်း ၄၅မြို့ ခန့်ကို အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်နဲ့ပို့ပေးနေပြီနော်။
အမည်: Prime baby diaper